Iinketho ezi-3 zokuThumela ii-Ecommerce eziqhuba ukuThengwa kokuZiphatha | Martech Zone
Iinketho ezi-3 zokuThumela ii-Ecommerce eziqhuba ukuThengwa kokuZiphatha
NgoMvulo, nge-19 kaDisemba ngo-2016 Douglas Karr
Ngelinye ixesha kunyaka ophelileyo, I-Omaha Steaks ngokungaqondakaliyo iqala ukuhambisa iifowuni kwinombolo yeLizwi likaGoogle engapapashwanga. Silinganisela i-voicemails ezingama-20 ukuya kwezingama-50 ngosuku kwaye inani liyanda njengoko sisondela kwiKrisimesi. Ndibathumelele i-imeyile, ndanxibelelana nabo kuFacebook, kwaye andikabafumani ukuba baphendule kwi-800 okanye iifowuni ezingacacanga ezixela imiba yokuhanjiswa okanye imibuzo malunga neodolo. Ukuba kukho umntu omaziyo ovela kwiqela labo elilawulayo, ndingathanda ukubona aba bathengi bekhathalelwe kwaye umba wendlela ulungisiwe… iyacaphukisa le nto.
Into ekwalatha kuyo kukuba kubaluleke kangakanani ukuhambisa ngenqanawa zonke ukuthengwa kweecommerce. Ngaphandle kokhetho lokuthumela oluthembekileyo nolonga iindleko, ixabiso lenkonzo (okanye incasa yee-steaks) ilahleka ngonaphakade. I-Walker Sands isandula ukuveza indlela ekubaluleke ngayo ukuhambisa ngendlela yokuziphatha komthengi:
Ukuhanjiswa simahla kwinqanaba lokuhambisa ngenxalenye yemini enye Ukuhanjiswa simahla kuyaqhubeka nokuba yinto ephambili yokuthenga, phantse abasithoba kwabali-10 abathengi Ukuxela ukuba ukuhanjiswa simahla kuya kubenza ukuba bathenge ngakumbi kwi-Intanethi, ngelixa phantse isiqingatha sabathengi Ukuhamba ngemini enye kuya kubenza ukuba bathenge ngakumbi kwi-Intanethi. Umthombo: I-Walker Sands 2016 yexesha elizayo loFundo lweeRetail
Ukuhanjiswa okuqinisekisiweyo kubambe ubunzima obukhulu kubathengi- Amalungiselelo sele eyinto ebalulekileyo kubathengi, kwaye eli nani liza kunyuka kuphela njengokuba iKrisimesi isondela. 68% yabathengi qwalasela ukuhanjiswa simahla xa ukhetha umthengisi, kwaye 62% thathela ingqalelo ukuhanjiswa okuqinisekisiweyo, okubaluleke kakhulu kubathengi kwiintsuku ezili-10 ezizayo. Umthombo: Urhwebo olumangalisayo Ingxelo yeholide ka-2016
Isantya sokuhambisa ngenqanawa kunye nexabiso linokwenza okanye liphule ukuthengisa - I-60% yamalungu eNkulumbuso eAmazon kwaye I-41% yamalungu angengawo iNkulumbuso Ukuhamba kancinci kuyabathintela ekuthengeni. Kwaye uninzi lwabaphenduli- phezu kwe85% - bavumile ukuba ukuhlawuliswa kweenqanawa kuyabathintela ekuthengeni into. Umthombo: Isifundo soMsebenzisi seAmazon
Ngokusekwe kuhlalutyo lwabathengi abangaphezu kwe-1,400 base-US, ingxelo yesithathu yonyaka ye-Walker Sands ihlalutya itekhnoloji ye-backend enoxanduva lokudala utshintsho kubathengi kule minyaka idlulileyo. Ngokumba nzulu kwidatha, uphononongo luhlalutya utshintsho olukhulu olwenzeka kwindawo yetekhnoloji yokuthengisa kunye nokuba abathengi kunye nabathengisi banokulindela ntoni ngo-2016 nangaphaya.
Ikamva le-Walker Sands 'le-2016 yoFundo lweeReta livavanya utshintsho olufihlakeleyo kwindlela yokuziphatha kwabathengi kunye nefuthe elibaluleke ngokulinganayo.
Khuphela i-2016 yeKamva loFundo lweeRetail
tags: ukuhanjiselwa ngenqanawe mahalaikamva leentengisoukuhanjiswa okuqinisekisiweyoI-Omaha Steaksukuthengisa kwakhona kwintengisoUkuhambisa ngenqanaweisantya sokuthumelaiisanti zokuhamba